दश रुपैयाँको लोभ देखाएर श्रीयाको बलात्कार ! - Everest Dainik - News from Nepal
दश रुपैयाँको लोभ देखाएर श्रीयाको बलात्कार !
कास्की, असोज १२ । पोखरा महानगरपालिका २२ पुम्दीभुम्दीस्थित कोदीमा बस्ने १० बर्षीया श्रीया सुनारलाई दस रुपैयाँको लोभ देखाएर बलात्कारपछि हतया भएको छ । सोमबार साँझ साढे ५ बजेदेखि हराएकी श्रीयालाई स्थानीयले मंगलबार विहान ८ बजेतिर कोदीस्थित भिरालो जंगलमा मृतावस्थामा फेला पारेका थिए ।
श्रीयाको शारीरिक अवस्था, टाउकोमा लागेको चोट तथा शरीरका लुगाको अवस्था हेर्दा स्थानीयले बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरेका थिए । विस्कुट किन्न भनी ५ रुपैयाँ लिएर पसल हिँडेकी श्रीया त्यसपछि घर फर्किनन् । रातिसम्म नै स्थानीयले उनको खोजी गरे पनि भेटेनन् ।
मंगलबार विहान कोदीमा नै बरालहरुको कुल मन्दिरको पुर्वी भागको भिरालो जमिनमा उनी मृतावस्थामा फेला परेकी थिइन् । बलत्कार गरी हत्या गर्ने पौडेल श्रीयाको श्रीयाको छिमेकी हुन् ।
उनले स्थानीय भट्टीमा रक्सी पिए । त्यसपछि बाँकी रहेको रक्सी बोकेर साथीको घरमा पुगे र पिउन थाले । त्यहाँबाट उनी चुरोट किन्न पसलतर्फ लागे ।
सोही समयमा श्रीया एक्लै तल झर्दै गरेको उनले देखे ।
पौडेलले बालिकालाइ चकलेछ खाउ भनि पाँच रुपैयाँ दिए । मन्दिरदेखि १० मिटर तल पुरानो घर र पानीट्याँकी बीचमा पौडेलले श्रीयालाई बोलाएर १० रुपैयाँ दिर्य जर्बजस्ती गर्न खोजे । बालिकाले प्रतिकार गर्न खोजेपछि पानीट्याँकीमुनिको झाडीमा फालिदिए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
ट्याग्स: Pokhara, Shriyaa sunwar